ऋग्वेद शर्मा –
चिठ्ठा परेर नसोचेको खुशी भेटिएजस्तो ‘गैएला र !’ भनेको ठाउँमा पुग्दा के गरौँ कसो गरौँको तालमा बुर्लुक्क उफ्रिन्छ मन । खै कसले कसो कसो गरी तान्छ स्वर्गकी जादुगर्नी भेटिएसरी । वर्षको एकपटक यस्तै यात्राले तान्छ कता कता । यसपटक पनि यसरी नै तानिएको हो ।
कतै जाने भनेपछि अघिल्लो रातदेखि नै निन्द्रा भाग्छ । आफू पुग्नुअघि मन पुगिसकेको हुन्छ । के होला, कस्तो होला भन्ने कल्पना त सामान्य नै भए । अनेक आकृति बनेर आँखाअघि आएको स्वरुप झनै भव्य बनिदिन्छ आफै पुग्दा ।
हावाको मन्द गतिमा नाचिरहेका रुख जस्तै निश्चल आँखा । आँखाबाटै देखिन्थ्यो उनीहरु भित्रको स्वच्छ स्वरुप । मानिस जस्तो प्रकृति । प्रकृतिजस्ता मानिस । हाम्रातिर झैँ भिन्न भिन्न छैनन् उनीहरु । टाढा टाढासम्म पनि कपट, स्वार्थको कुनै आभाष भेटिँदैन । यसैले हो यहाँ घुम्दा अरु केही याद हुँदैन । आँखा अघि जे छ त्यसैमा रमाउँछ मन, त्यसैमा हराउँछ । अनेक दुःख, झमेला, अशान्तिलाई विश्राम दिन पाउँदाको स्वर्गीय आनन्द यसै त कसरी मिल्ला र !
लखर लखर डुल्ने बानी त पुरानै हो । काम परेर पुगेको ठाउँको फोटो पोस्टेर ‘घुमियो’ भनेर त कति लेखियो कति । घुम्ने मात्र उद्देश्यले कतै जान थालेको पनि तीन वर्ष भएछ । यसरी घुम्नु अघि त्यस्ता केही विशेष उद्देश्य रहँदैनन् । केही उद्देश्य राखेर घुम्न निस्कँदा घुमाई काम बनिदिन्छ । अनि हृदय छेड्ने सुन्दर दृश्य पनि खल्लो बनिदिन्छ । त्यसैले ‘प्रकृतितर्फ फर्क’ को सुत्र झैँ मनमौजी पारामा हिँड्दा मजा निकै भेटिन्छ । लेखेर बुझाउन नसकिने, भनेर सुनाउन नसकिने अनौठो मजा ।
यस्तै मजाले हो लगातार ३६ घण्टाभन्दा बढीको बस यात्रा पनि निरस लागेन । झण्डै २२ घण्टाको पैदलले पनि अप्ठेरो अनुभव भएन । एक थाल सादा भातको तीन सय रुपैयाँ तिर्दा पनि मन्खत लागेन । बाटामा केही क्षण ‘अब होस्’ को महसुश नभएको भने होइन, तर जब राराको काखमा पुगियो । आँखाबाट विस्तारै विस्तारै राराको पानी मनसम्म पुग्यो, त्यो थकान बल बनिदियो, त्यो दुखाई रोजाइँ ।
हावाको झोकासँगै फेरिने छालको बाटो र वेग, राराको सुन्दर तस्बिर । तस्बिरमा देख्दै बोलाएको हो राराले । राराको बोलावट नकार्न कसरी सकिएला त ! घरी बेहुली झैँ लजाएकी, घरी पङ्ख फिजाएर मयुर झैँ नाचेकी प्रकृतिको सुन्दर उपहार । मुगुमा रहेको रारा दिनभर अनेक रङ्गमा देखिन्छ । रारा नपुग्दा गरेका धेरै कल्पना त्यो भन्दा ठूलो आकारका हुन्छन् यथार्थमा ।
समुद्री सतहबाट २ हजार ९ सय ९० मिटर उचाईमा रहेको नेपालकै ठूलो ताल राराले सबैलाई आफूजस्तै भव्य बनाइदिन्छ । जंगलको बिचमा रहेको तालले घामको प्रकाशसँगै रङ बदल्छ । १० दशमलव ८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको राराको अधिकतम लम्बाई ५ किलोमिटर र अधिकतम चौडाई ३ दशमलव २ किलोमिटर छ भने गहिराई १ सय ६७ मिटर छ । यी अंकहरुको समूहभन्दा निकै ठूलो छ रारा । ब्याख्या भएका शब्दभन्दा निकै सुन्दर ।
काठमाडौंबाट कर्णाली यातायातको बस चढेको ३६ घण्टामा जुम्ला पुगियो । त्यतिन्जेल बस नै आफ्नो लागिसकेको थियो । बसका कर्मचारी परिवार । ढोकामा उभिने फुच्चे केटो घरी घरी हामीतिर हेरेर मुसुक्क हाँस्थ्यो । उसको हाँसोले बसमा बस्दाबस्दा थाकेको ज्यानमा अनौठो मालिस पुग्थ्यो ।
कहिले हामी चढेको बस बिग्रने कहिले अरु बस बिग्रिएर हामी अडिनुपर्ने । खाना, खाजा र शौच बाहेकका यस्ता विश्रामले पनि यात्रामा नौलो रोमाञ्चकता थप्यो । यात्रामा निस्कनु केही दिनअघि खुट्टा सुन्निनेगरी खेलेको फुटबलले बेला बेला मलाई झस्काइरहेको थियो । मनमा ‘जुम्ला पुग्दासम्म त कसो ठीक नहोला’ भन्ने आशले निराश हुनबाट रोक्यो । फेरि सम्झियो ‘दुई दिन त हिँड्नै छ ।’
बाटोबाटोमा भेटिएका नयाँ कुराले हामीलाई पनि नयाँ बनाइरहेको थियो । बुटवल कटेर उता नगएको मलाई त प्रत्येक ढुंगा नौलो लागिरहेको थियो । बाटो छेउमा उभिएको सल्लाको बोटले ‘को हो यो ?’ भनेर हेरिरहे जस्तो ।
हामी एकैछिन गाडी रोकिए तल ओर्लिएर खुट्टा तन्काउन पाउने आशमा हुन्थ्यौँ । हामी अर्थात सँगै थिए साथीहरु शिब बोहरा, अर्जुन पोख्रेल र उत्तम काप्री । शिब र अर्जुनसँग गएका दुई वर्ष पनि यात्रा बाँडिएको हो । हाम्रो टोलीमा नयाँ थिए उत्तम । हामी घुम्न जान लागेको थाहा पाएदेखि सबैले सोधेको प्र्रश्न हो, ‘तिमीहरु आफै घुम्ने ?’ हाम्रा उत्तर आआफ्नै थिए, म नबोलिकनै जवाफ दिन्थेँ ‘हो’ ।
बाटामै खाइयो चिया र बम पाउरोटी । साना केटाकेटीले बेचेका १० को चार दाना बेलौती । गुँरासे डाँडाको भात । गुँरासेमा बस रोक्नुअघि यात्रुहरुले भनेका थिए, ‘गुँरासेको भात मीठो हुन्छ । त्यसैले कोहलपुर, सुर्खेत कटेर दैलेख गुँरासेको भातका लागि बढेको हो बस । गुँरासे डाँडा चढ्दा मन चसक्क भयो । ‘भात खाने ठाउँसम्म त पुगिएला !’ उकालो साँघुरो बाटोमा एउटै मात्र रमाइलो थियो तल देखिने बजार र डाँडाको हरियाली ।
‘यहाँ गुँरास फूल्ने बेला आउँदा निकै रमाइलो देखिन्छ’ कोही बोल्यो । हाम्रो डराएको मन ‘गुँरासे... ल भात खान झर्नुस्’ सुनेर थामियो । बसभरि सुनेको तारिफजस्तो मीठो भने थिएन गुँरासेको भात । भात खाएर बसमा चढेपछि सायद अघि गुँरासेको भात भन्दै ब्याख्या गर्नेले नै थपे, ‘यहाँ होइन । मीठो भात अलि अगाडि थियो । गाडीहरुको मिलेमतोले यहाँ रोके ।’ आफ्नो भनाई टिकाउने उनको उपाय मलाई गजब लाग्यो ।
गुँरासेको डाँडाबाट फेरि उस्तै बाटो बस ओरालोतिर लाग्यो । चढ्दा जतिको डर नभए पनि बाटो सहज थिएन । बेला बेला मोडमा आँखा चिम्म गर्यो । अलि सजिलो जस्तो बाटोमा यसो बाहिर हेर्यो र फोटो खिच्यो । दैलेखको यस्तै कहिले झस्काउने, कहिले रोमाञ्चित पार्ने बाटो हुँदै कालिकोट पनि लागियो । बेलुकी भइसकेकाले आजको बास कालीकोटमा मान्ममै हुने भयो भन्ने मनमा थियो ।
तर जुम्लाबाट बिहान ५ बजे यात्रु लिएर फर्किनुपर्ने गाडीवालको तालिकाले रातै परे पनि हामी जुम्ला नै पुग्ने भयौँ । अध्यारोमा देखिने अलि अलि उज्यालोबाटै हेरियो मान्म । कर्णाली राजमार्गमा यात्रुवहाक गाडी राति ८ बजेपछि चल्न नदिने भए पनि मिलाएर, खुवाएर जसरी हुन्छ जुम्ला पुग्ने गाडीवालकै मनस्थितिसँग हामी पनि सामेल थियौँ । भनेजस्तै चेक प्वाइन्टमा रहेका प्रहरीलाई नास्ता पानीको व्यवस्था मिलाएर कन्डक्टरले बस राति पनि लान पाउने सूचना सुनाए । कालिकोट नाग्म पुगेर रातको खाना खाई हामी जुम्लातिर हानियौँ ।
रातको समय कर्णाली राजमार्गको साघुँरो बाटो । मुटु हत्केलामा राखेर नडराएको स्वाङ पार्नुपर्ने । साथीहरु बेला बेला मजाक पनि गर्थे ‘ला त एकछिन मेरो मुटु राखिथे ।’ दिउँसो बाटो अप्ठेरो भए पनि वरपर देखिने दृश्यले अलि आड दिन्थ्यो । रात परेपछि त डर मात्रै । डरै डरमा दैलेख, कालिकोट हुँदै जुम्ला पुगियो । जुम्ला पुग्ने बेला भने बाटो केही सजिलो थियो । ३६ घण्टाको बस यात्रा बल्ल सकियो । मनले शान्ति पायो । बस चढेदेखिका सबै कुरा सरर आए । धन्न अब केही दिन बस चढ्नु पर्दैन । हामी जुम्लादेखि हिँड्दै मुगु रारासम्म पुग्ने तयारीमा थियौँ ।
बिहान जुम्ला बजार र चन्दननाथ मन्दिर घुमेर हाम्रो रारा पैदल यात्रा शुरु भयो । जुम्लामा भेटिएका साथी भन्थे ‘हिँडेरै जानुहुन्छ ?’ हामी हिँडेरै रारा पुग्ने भन्दा धेरैले अचम्म माने । बाटोमा भेटिएकी एक दिदीले त यत्रो बाटो किन हिँड्नुहुन्छ मोटरसाइकलमा जानुस् भनेर नमागेको सल्लाह सित्तैमा दिनुभयो । हामी कर्णाली हेर्न चाहन्थ्यौँ । माटोको बास्ना लिन चाहन्थ्यौँ । रुख, पात पतिङ्गरसँग दोस्ती बनाउन चाहन्थ्यौँ । मानिसहरुको मन छुन चाहन्थ्यौँ । हाम्रो अथाह ज्ञान पाउने लालसा रारा पुग्नुमा मात्र सीमित थिएन । रारा पुग्दासम्मका हरेक गौडा हाम्रो परीक्षा थियो । हिँडेरै जाने हाम्रो अठोटलाई मानिसहरु निराश पार्दै थिए । हामी भने झनै उत्साही हुँदै थियौँ ।
डाँफे उकालो हाम्रो स्वागतमा झनै अग्लिएजस्तो थियो । यत्रो उकालो, चर्को घाम । शुरुको हिँडाइ भएकाले हामी एकै सासमा चढिसक्ने जोशमा थियौँ । उकालोमा भेटिएका आत्मीय साथ हाम्रा लागि केबलकार बनिरहेको थियो । आँट आउथ्यो, यसै सरर काटिन्छ यो गौडो । मनले मनलाई प्रश्न सोध्थ्यो, ‘यहाँका मान्छे किन यति बिघ्न राम्रा ?’
उकालोभरि कहिले छोरा बन्न पायौँ, कहिले भाइ, कहिले साथी । भेटिएकाहरुको बोलि मीठो । पानी नभएको ठाडै उकालामो रस थियो उनीहरुको बोलाइ । ‘भाइ तपाइँहरु उल्टो बाटो जानुभयो । त्यता होइन । फर्किनुस् । यताबाट जाने हो’ यो स्वर हाम्रा लागि शक्ति थियो । आहा ! कस्तो निश्चल मन । यति टाढा पुगेका हामीलाई बोलाई बोलाई सही बाटो देखाइदिने ती दिदीले नै मीठो खाजा बनाएरसमेत खुवाउनुभयो ।
ठूला ठूला पाटन । पाटनमा चरिरहेका घोडा । सिंहजस्ता देखिने भोटे कुकुर । नौला फूल । अनि सबैभन्दा राम्रा ... मान्छेजस्ता मान्छे । ठाडै उकालो अनि ठाडै ओरालो । हामी साधनका बानी परेकाहरुलाई उकालो ओरालोको भाषा सहज थिएन ।
उक्लँदा उक्लँदै उकालोमा
उक्लेको बाटो नै ओर्लिएपछि
उक्लनेको पनि केही लाग्दो रहेनछ ।
ओर्लंदा ओर्लंदै फेरि
ओर्लेको बाटो नै उक्लिएपछि
ओर्लनेको पनि केही लाग्दो रहेनछ ।
हिँड्दा हिँड्दै मोडमा
हिँडेको बाटो नै मोडिएपछि
हिँड्नेको पनि केही लाग्दो रहेनछ ।
कवि तुलसी दिवसको कविता सम्झँदै यात्राका उकाली ओराली र जीवनका उकाली ओराली तुलना गर्दै हिँडे । जीवनका उकाली ओराली करले चढ्नुपर्ने । करले झर्नुपर्ने । यात्राका उकाली ओराली रहरले चढिने रहरैले झरिने ।
‘बाबु यो लठ्ठी लिएर जाउ,
भयो भयो पर्दैन,
होइन होइन लग न ।
खाजा खाने पसलका बुवाको माया त्यतिबेला बुझियो जब अर्को खुट्टा नथपे दुई खुट्टा सर्ने स्थितिमै थिएनन् । जीवन जस्तै चढ्दा सहज, रमाइलो । झर्दा कष्ट, नरमाइलो । खुट्टा थिचिएर ओरालोको ती बाको मायाले निकै साथ दियो । खुट्टा मेसिन जस्तो भएको थियो । मस्तिष्कसँग कुनै सम्बन्ध नभई आफ्नै तालमा अघि बढीरहे जस्तो । काभ्रया पुग्दै बेलुकी भइसकेको थियो । तै पनि भोलिका लागि सहज बनाउने आशमा हामी जसोतसो चौथासम्म पुग्न कस्सियौ । मनले आँटेपछि शरीरले तान्छ भनेझैँ बेलुकी हामी बास बस्न जुम्लाको चौथा बजार पुगिछाड्यौँ ।
चौथा न्यू हिमाल होटलमा पाएको आतिथ्य यहाँ जति लेखे पनि पुग्दैन । यात्राभरको निकै आत्मीय क्षण बित्यो चौथामा । जहाँ जगजित भण्डारी एउटा बिर्सनै नसकिने नाम बनिदियो । उनी होटल मालिक भए पनि हाम्रा लागि दाइ, बुबा, काका थिए । भोक र थकानले लखतरान परेर पुगेका हामीलाई उनीहरुको सत्कार नै औषधी थियो । पारीवारिक गफसँगै तातो पानी, उसिनेको फर्सी, जडिबुटी चिया र मीठो भात त छँदै थियो, थाकेर आउनुभएको छ भनेर तताएर तेल घस्न दिँदा जुम्ली मायाको अनुपम सौगात पाइयो ।
हिमाल होटलबाट बिहानै उठेर हामी रारा यात्राको निरन्तरतामा लाग्यौँ । अघिल्लो दिनजस्तै उही बाटा उही मौसम । एक घण्टा हिँडेर भुलभुलेमा चिया बिस्कुट खान रोकियौँ । त्यसपछि थोरै पाटनको बाटो हिँडेपछि घना जंगलको ओरालो लाग्यौँ । भुलभुलेबाट अघि बढेर आर्मी चेक पोस्ट पुग्दा रारा जाने दुईवटा बाटा थिए । हामीलाई होटलका दाइहरुले झ्यारीको बाटो जानुस्, लेकको बाटो जानुभयो भने हराउनु होला भनेका थिए ।
त्यसैले आज्ञाकारी विद्यार्थीले झैँ हामीले झ्यारी हुँदै जाने लामो बाटो नै रोज्यौँ । उकालो, ओरालो, केही तेर्सो हुँदै हिँड्दा अब त मानिसहरु पनि भेटिन छाडेका थिए । ठाडो ओरालो सकिएपछि भेटिएका मानिसलाई सोध्थ्यौँ ‘अब झ्यारी पुग्न कति समय लाग्ला ?’ – आधि घण्टा । आधि घण्टा भनेपछिको ४० मिनेट हिँडेपछि सोध्दा पनि उही जवाफ आउँथ्यो, ‘अब आधि घण्टा ।’ सोध्दा कसैले १० मिनेट पनि भनिदिन्थे अनि हामी थाकेको शरीर बुरुक्क उफ्रेर फटाफट हिँड्थ्यौँ ।
यात्रासँगै जीवनकै ठूलो सपनाजस्तो भएको थियो झ्यारी । अब जहिले पुगिएला ठानेर कसैलाई नसोधी हामी बढीरह्यौँ । झ्यारी पुगेपछि पनि लौ है आयो भन्ने उत्साह रहेन । झ्यारीसँगै ठाडै उकालो थियो रारा पुग्न हाम्रा अघि । झ्यारीमा भात खाएर हामी उकालो लाग्यौँ । झ्यारीको भातले हो या राराको शक्तिले थाकेर ढल्न ठिक्क परेको शरीर उकालो पार गरी छाड्यो । राराको छेउछाउ पुगेको आभास त्यहाँको वातावरणले दिन्थ्यो । ‘दाइ घोडामा जाने हो ?’ भनेर सोध्न आउनेहरुबाट पनि हामीले अडकल लगायौँ अब रारा टाढा छैन ।
उकालो सकिएपछि दुई दिनदेखि नबजेको हाम्रो मोबाइलमा रिङ टोन बझ्न थाले । कहाँ पुगे होला भनेर सोच्नेहरुलाई हामीले खबर गरिदियौँ, ‘हामी रारामा छौँ ।’ हामीले फोनमा ‘हामी रारामा छौँ’ भनिदिए पनि आँखा अघि रारा थिएन । थोरै चौरको बाटो । थोरै जंगल पार गरेपछि एकैपटक आँखामा ठोक्कियो विशाल रारा । राराको काखमै नपुगेसम्म लुक्दी रहिछिन् रारा । छेउमै पुगेपछि मात्रै खुलेर देखिइन् ।
ओ हो ! आइपुगियो । राराको अघि पुगेको खुशी कसरी देखाउने, कसरी रमाउने अलमल भयो । उफ्रन मन भयो । पानीमा गएर सुत्न मन भयो । एकैपटक पूरै रारालाई अंगालो हालौँ जस्तो । रारामा रमायौँ हामी । पानीमा खेल्यौँ । आमाको छातीमा टाउको राखेर निदाए जस्तो । प्रेयसीको काखमा सुतेर आकाश हेरे जस्तो । अझ त्यो भन्दा पनि बढी ।
कुनै उदाहरणले नपुग्ने कुनै बिम्बले नहुने सुन्दरताको काख हो रारा । धेरै सपनाले आकार लिए जस्तो । दुःखले थकाइ मारे जस्तो । तालको छेउ भएर वहने बतासले गाएको गीतमा नजाने पनि नाच्यौँ हामी । अनि झनै जवान भयौँ ।